Shiinaha Mashiinka wax lagu rakibo ee wax soo saarka MSW450 Soo saar iyo Warshad | Yuanhengtong
Baaxadda codsiga Inta badan waxay ku habboon tahay salka dheriga kulul, wolfberry iyo saxaarad kale oo leh dhammaan noocyada qaab adag ee walxaha caadiga ah. Astaamaha waxqabadka 1. Fursadda waxaa wada saddex faasas oo ay koontaroolaan kontoroolka dhaqdhaqaaqa. Isku dhafka labada ah ayaa ka dhigaya mashiinka saxnaan sare, xasilooni sare iyo firfircoonaan wanaagsan. 2. Qaybaha muhiimka ah ee mashiinku waxay ka sameysan yihiin bir bir ah, iyagoo buuxinaya shuruudaha caafimaadka ee cuntada QS (liisanka wax soo saarka) GMP (baakadaha daroogada); 3. Reciprocatin ...
Badanaa waxay kufiican tahay salka dheriga kulul, yeeyga iyo saxaro kale oo leh dhamaan noocyada qaab adag ee walxaha caadiga ah.
1. Fursadda waxaa wada saddex faasas oo ay koontaroolaan dhaqdhaqaaqa koontaroole. Isku dhafka labada ah ayaa ka dhigaya mashiinka saxnaan sare, xasilooni sare iyo firfircoonaan wanaagsan.
3. Dib-u-casriyeynta mooshinka waxaa loo qaatay shaabadda dhamaadka. Ku dheeree waqtiga waqtiga wax lagu xidho, saamaynta wax lagu xidho ayaa ka qurux badan;
4. Shaabbada toosan waxaa lagu kululeeyaa kuleylka tooska ah, shaabadda tooska ahna si toos ah ayaa loo furaa marka mashiinka la xiro si looga fogaado filimka filimka marka mashiinka la xiro;
5. Isdhexgalka mashiinka-mashiinka wuxuu qaataa shaashadda midabka taabashada, taasoo u saamaxaysa adeegsadaha inuu si cad u shaqeeyo mashiinka una beddelo interface-ka si xorriyad leh, taasoo ka dhigaysa hawlgalka mid aan loo baahnayn;
6. Shaashadda taabashada, booska quudinta ee habka quudinta waa la beddeli karaa oo la hagaajin karaa (qaybta hore iyo xagga dambe ee mm);
7. Cabbirka dhererka bacda otomaatiga ah waxaa lagu ogaan karaa hal fure oo shaashadda taabashada ah;
8. Ogaanshaha sawir koronto ee laba-geesoodka ah iyo raad-raaca laba-geesoodka ah ayaa si wax ku ool ah u baabi'in kara cilladda baakadka (± 1mm) oo ka fogow qashinka maaddada.
Ballaca Filimka 450mm
Dhererka boorsada 70-350mm
Ballaaran Bacaha <180mm
Soo saar Ctheight <100mm
Heerka Baakadaha 20-120bag / min
Baaxadda Mashiinka 4800 × (W) 1060X (H) 1500
Miisaanka guud 1200KG
Hore: Mashiinka barkinta barkin soo noqnoqoshada soo noqnoqda
Xiga: Qaybo gaar ah oo ka mid ah boolal qaab-gaar ah oo qaabaysan iyo lowska